I-Apple Releases Safari Technology Preview 137 | Ngivela kwa-mac
Inguqulo entsha yesiphequluli sokuhlola i-Safari Technology Preview, kulesi simo ifinyelela ku-137. Kule nguqulo entsha ukuthuthukiswa kwengezwa ekuzinzeni nasekusebenzeni kwayo, futhi, njengenjwayelo, iziphazamisi ezitholwe enguqulweni ekhishwe cishe eminyakeni emibili edlule ziyalungiswa. . Inguqulo engu-135 ye-Safari Technology Preview yeza nokusekelwa kwezithombe zokuskrola eziyi-120Hz, ezinikeza ngokuqondile ukuskrola okushelela kakhulu lapho upheqa amakhasi ewebhu nakho konke. amamodeli webanga elisha le-MacBook Pro lika-2021.
Lona isiphequluli esizimele ngokuphelele Ingasetshenziswa yiwo wonke umuntu one-Mac, lapho abasebenzisi abaningi bezama lesi siphequluli, impendulo etholwa kakhulu i-Apple ukuthola izimbungulu nokusebenzisa ukulungisa okudingekayo. I-Apple incisive ngalesi siphequluli sokuhlola futhi njalo emavikini amabili sinenguqulo entsha etholakalayo. Kubukeka sengathi ushintsho oluncane nokuthuthuka okwenziwe kunguqulo ngayinye kuthuthukisa isiphequluli.
Futhi, njengoba sihlala sikhumbula kuzibuyekezo ezifika ku-Safari Technology Preview, lokho ukufaka isiphequluli akudingekile ukuthi ube ne-akhawunti kanjiniyela noma efanayo, Noma ngubani angalanda mahhala ukuze azame kwi-Mac. Okumele sikwenze ukufinyelela iwebhusayithi yonjiniyela nokulanda inguqulo yakamuva etholakalayo ye- Ukubuka kuqala kwe-Safari Technology. Lapho abasebenzisi bezama lesi siphequluli, kulapho i-Apple ithola impendulo eyengeziwe yokuthola iziphazamisi futhi isebenzise izilungiso ezidingekayo ezinguqulweni ezilandelayo zesiphequluli esisemthethweni wonke ama-Mac asifakile njengejwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » Ukubukwa Kwe-Apple Ukukhishwa Kokuqala kwe-Technology 137
I-iMac engu-27-inch enesibonisi se-mini-LED iya ekukhiqizweni